AYA Joy Travel Insurance - AYA SOMPO Insurance
Explore the World with AYA JOY Travel
BUY AYA JOY
ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးသွားစဉ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော အကြမ်းဖက်မှု၊ မတော်တဆမှု၊ ပြင်ပနှင့်မြင်နိုင်သောနည်းလမ်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ကိုယ်ခန္ဓာဒဏ်ရာ ရရှိမှု၊ မသန်စွမ်းမှု သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းတို့အတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ ပေါ်လစီသည် ခရီးစဉ်အတွင်း ခရီးသွားရာတွင် အဆင်မပြေမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ပြန်လည်ပေးပါသည်။
အခြေခံ မတော်တဆ သေဆုံးခြင်း 10,000,000 10,000,000(လူကြီးတစ်ဦးလျှင်) 3,000,000(ကလေးတစ်ဦးလျှင်) 10,000,000 10,000,000(လူကြီးတစ်ဦးလျှင်) 3,000,000(ကလေးတစ်ဦးလျှင်)
ဆေးကုသစရိတ်၊ ဆေးရုံစရိတ်နှင့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များ (အသက် ၇၀ အရွယ်အထိ) အများဆုံး 100,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 300,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 100,000,000 ကျပ်အထိ (တစ်ဦးလျှင်) အများဆုံး 50,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 100,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 50,000,000 ကျပ်အထိ (တစ်ဦးလျှင်)
တစ်ပါးသူထိခိုက်နစ်နာခြင်း အများဆုံး 100,000,000 အများဆုံး 100,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 100,000,000 အများဆုံး 100,000,000 ကျပ်အထိ
အပိုအကာအကွယ် ၁ ဆေးရုံတက်စရိတ် 3,000,000 100,000 (တစ်ရက်လျှင်) 10,000,000 100,000 (တစ်ရက်လျှင်, တစ်ဦးလျှင်) အများဆုံး 3,000,000 Up to 100,000 (တစ်ရက်လျှင်) အများဆုံး 10,000,000 100,000 (တစ်ရက်လျှင်, တစ်ဦးလျှင်
အပိုအကာအကွယ် ၂ လေယာဥ်နောက်ကျခြင်း (၆ နာရီဆက်တိုက်နောက်ကျပါက ကျပ် 50,000 နှင့် ၆ နာရီဆက်တိုက်ထက်ပို၍ နောက်ကျပါက ကျပ် 70,000) 1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000
အပိုအကာအကွယ် ၃ ခရီးဆောင်အိတ်နောက်ကျခြင်း (သတ်မှတ်ထားသော ဆိုက်​ေရာက်ရာနေရာတွင် Check-in ဝင်ပြီး ၆ နာရီဆက်တိုက် နောက်ကျပါက ကျပ် 50,000) 300,000 800,000 300,000 800,000
အပိုအကာအကွယ် ၄ ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့် ကိုယ်​ရေးကိုယ်တာ အကျိုးများ ဆုံးရှုံးခြင်း (တစ်ခုတည်း သို့ အစုံလိုက် သို့ အတွဲလိုက်ဆုံးရှုံးခြင်းများ အတွက် ကျပ် 200,000) အများဆုံး 1,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 3,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 1,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 3,000,000 ကျပ်အထိ
• အသက် (၇၀) အောက် လူကြီးများ
• မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ရရှိသူ (သို့) တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ
အသက် ရက် (၃၀) နှင့် (၁၈) နှစ်ကြား (သို့) အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုတွင် အချိန်ပြည့် ပညာသင်ကြားသူများအတွက် အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ်အထိ
Individual Plan (တစ်ဦးချင်းအတွက်)
အသက် (၇၀) အောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ရရှိသူ (သို့) တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူများအနေဖြင့် “Individual Plan” အကာအကွယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Family Plan (မိသားစုအတွက်)
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၊ အလုပ်မလုပ်သည့်မိသားစုဝင်များ နှင့် လက်မထပ်ရသေးသော ကလေးများအတွက် “Family Plan” ဖြင့် အကာအကွယ် ရယူနိုင်ပါသည်။
ပရီမီယံနှုန်းများသိရှိရန် ပေးထားသော အချက်အလက်များထည့်၍ တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်ပါ။
၁။ နဂိုရှိရင်းစွဲ ရောဂါလက္ခဏာများ
၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း၊ သတ်သေရန်ကြိုးစားခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း
၃။ ဆေးသုံးစွဲခြင်း၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဆိုးကျိုးများ
၄။ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ AIDS (သို့) ARC၊ HIV စသော ရောဂါများကြောင့် ထိခိုက်မှုများ
၅။ မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းမှလွဲ၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်း (ခွဲစိတ်မွေးဖွားခြင်း) ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းနှင့် ၎င်းကိစ္စရပ်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ
၆။ ဆရာဝန်၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဆန့်ကျင်၍ ခရီးသွားခြင်း
၇။ ဆေးကုသမှုခံယူရန် နှင့် ဆေးစစ်ဆေးရန်အတွက် ခရီးသွားခြင်း
၈။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများဖြစ်သည့် စိတ်မတည်ငြိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိတ်ကစဥ့်ကလျားဖြစ်မှု စသည့် လက္ခဏာများ
၉။ နိုင်ငံအားကစားပွဲများတွင် အားကစား (သို့) ဂိမ်းများတွင် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခြင်းများ
၁၀။ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲ၊ မော်တော်ကားပြိုင်ပွဲ၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ကျောက်တောင်တက်ခြင်း၊ တွင်းတူခြင်း၊ လေထဲခုန်ချခြင်း၊ လေထီးခုန်ခြင်း၊ ​ေရငုပ်ခြင်း၊ အမြင့်ခုန်ခြင်း၊ အမြင့်ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း နှင့် လေပူဖောင်းစီးခြင်းစသည့် အန္တရာယ်ရှိ အားကစားနည်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်မှုများ
၁၁။ တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ
၁၂။ သယ်ယူပို့ဆောင်စဉ် ဌားရမ်းထားသော (သို့) တင်ဆောင်ထားသော ပစ္စည်းကိရိယာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း
၁၃။ ပြည်ပလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ကုန်သွယ်ခြင်း အလုပ်အကိုင်များ
၁၄။ စစ်ပွဲ၊ ကျူးကျော်ခြင်း၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော်ဝင်​ရောက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းစစ်၊ ပုန်ကန်မှု၊ တော်လှန်ရေး၊ ဆန္ဒပြမှု၊ အဓိကရုဏ်း၊သပိတ်မှောက်မှုများ
၁၅။ နျူကလီးယားလောင်စာများ (သို့) ​ရေဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ဓာတ်ရောင်ခြည် (သို့) ညစ်ညမ်းပျက်စီးမှုများ
၁၆။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများ၏ နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ
၁။ အာမခံအကာအကွယ်က ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ?
AYA Joy ခရီးသွားအာမခံကို အနည်းဆုံး ၁ ရက်မှ အများဆုံး ၃၁ ရက်ဆက်တိုက်ကာလအထိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၂။ အာမခံအကာအကွယ်က ဘယ်အချိန်စတင်မလဲ?
သင်၏နေအိမ် သို့မဟုတ် အာမခံဝယ်ယူရာတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် စတင်မည့် နေရာမှ စတင်ထွက်ခွာသည့်အချိန်မှစ၍ (သတ်မှတ်ထားသည့် ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီ ၂၄ နာရီထက် စော၍ဖြစ်စေ၊ ​ခရီးေရာက်ရှိမည့်နေရာသို့ ၂၄ နာရီထက်နောက်ကျ၍ဖြစ်စေ အကာအကွယ် အကျုံးမဝင်ပါ။) သတ်မှတ်ထားသော ဆိုက်​ေရာက်ရာနေရာသို့ ​ေရာက်ရှိသည့်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၃။ ပရီမီယံကြေးကို ဘယ်လိုပေးချေရမလဲ?
၄။ သက်တမ်းတိုးလို့ ရပါသလား?
ခရီးသွားအာမခံပေါ်လစီတွင် သက်တမ်းတိုး၍ မရနိုင်ပါ။
၅။ ခရီးသွားအာမခံကို ဝယ်ယူပြီးနောက် ခရီးစဉ်အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲလိုပါက ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ?
ခရီးသွားကာလ သို့မဟုတ် ဦးတည်ရာနေရာများကို ခရီးစဥ်မစတင်မီ ခရီးစဥ်မစတင်မီရက်မတိုင်ခင် (၂၄) နာရီ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၆။ အဓိက လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်တဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေလဲ?
ခရီးသွားအာမခံအကာအကွယ်သည် ပေါ်လစီမှ သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်သည့် အချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှုများကို အကာအကွယ်မပေးပါ။ (ဥပမာ – ရှိရင်းစွဲ​ေရာဂါလက္ခဏာများ၊ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း သတ်သေရန်ကြိုးစားခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ဆေးသုံးစွဲခြင်း၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဆိုးကျိုးများ) မှတ်ချက် – လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်သည့် အချက်များကို ပေါ်လစီတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၇။ လျော်ကြေးတောင်းခံမည်ဆိုပါက ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းတွေ လိုအပ်မလဲ?
လိုအပ်သော ဆောင်ရွက်ချက် / စာရွက်စာတမ်းများ
Claim Form ကို ခရီးမထွက်ခွာမီ download လုပ်ထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အကယ်၍ လျော်ကြေးတောင်းခံရန်လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်၊ ဆေးရုံမှငွေတောင်းခံလွှာနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို ပြည့်စုံစွာတင်သွင်း၍ လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်ပါသည်။
ဆေးကုသစရိတ်၊ ဆေးရုံစရိတ်နှင့် အခြားအသုံးစရိတ်များ
လျော်ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံ / ရဲအစီရင်ခံစာ / ခန့်မှန်းချက် / ဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံလွှာ စသည်တို့ လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးရုံထောက်ပံ့ကြေး လျော်ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံ / ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်စသည်တို့ လိုအပ်ပါသည်။
လေယာဉ်ချိန် နှောင့်နှေးခြင်း လျော်ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံ / ခရီးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်း အထောက်အထားများ စသည်တို့ လိုအပ်ပါသည်။
ခရီးဆောင်အိတ်နောက်ကျခြင်း လျော်ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံ / သက်ဆိုင်ရာမှ အိတ်နောက်ကျခြင်း အစီရင်ခံစာတို့ လိုအပ်ပါသည်။
ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးမှု လျော်ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံ / ပျက်စီးသွားသောပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးကို ပြန်ပေးရန် Receipt သို့ Credit Card အချက်အလက်တို့ လိုအပ်ပါသည်။
၈။ သတိထားသင့်တဲ့ အဓိက အချက်အလက်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ?
အာမခံထားသူ၏ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွား​ေရးလုပ်ငန်းများနှင့် မသက်ဆိုင်သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အာမခံဝယ်ယူမည်ဆိုပါက Proposal Form (အဆိုပြုလွှာ) တွင် မှန်ကန်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာမခံထားသူသည် မေးခွန်းများကို မှန်ကန်စွာနှင့် တိကျစွာ ဖြေပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မေးခွန်းများအား မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုခြင်းမရှိပါက အာမခံပေါ်လစီအား ငြင်းပယ်ခြင်း၊ လျော်ကြေးငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် အာမခံပေါ်လစီဖျက်သိမ်းခြင်းများအား ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အာမခံထားသူဘက်မှ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အန္တရာယ်ကို လက်ခံနိုင်သည့် အတိုင်းအတာနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ အာမခံထားသူသည် အသက်အာမခံထားရှိခြင်း၊ Proposal Form ပါအချက်အလက်များ ပြောင်းလဲခြင်းများ (သို့) အသက်အာမခံထားရှိသူသည် ခရီးသွားအာမခံထားမည်ဆိုပါက ကုမ္ပဏီကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၉။ ခရီးသွားအာမခံအကြောင်းကို ထပ်သိချင်ရင် ဘယ်လိုစုံစမ်းနိုင်မလဲ?
AYA SOMPO အာမခံ၏ Customer Service Hotline – +959 777 100 555 သို့ တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အခြေခံ မတော်တဆ သေဆုံးခြင်း 10,000,000 10,000,000(လူကြီးတစ်ဦးလျှင်)
3,000,000(ကလေးတစ်ဦးလျှင်) 10,000,000 10,000,000(လူကြီးတစ်ဦးလျှင်)
ဆေးကုသစရိတ်၊ ဆေးရုံစရိတ်နှင့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များ (အသက် ၇၀ အရွယ်အထိ) အများဆုံး 100,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 300,000,000 ကျပ်အထိ
အများဆုံး 100,000,000 ကျပ်အထိ (တစ်ဦးလျှင်) အများဆုံး 50,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 100,000,000 ကျပ်အထိ
အများဆုံး 50,000,000 ကျပ်အထိ
အပိုအကာအကွယ် ၁ ဆေးရုံတက်စရိတ် 3,000,000
100,000 (တစ်ရက်လျှင်) 10,000,000
100,000 (တစ်ရက်လျှင်, တစ်ဦးလျှင်) အများဆုံး 3,000,000
Up to 100,000 (တစ်ရက်လျှင်) အများဆုံး 10,000,000
100,000 (တစ်ရက်လျှင်, တစ်ဦးလျှင်
အပိုအကာအကွယ် ၂ လေယာဥ်နောက်ကျခြင်း
(၆ နာရီဆက်တိုက်နောက်ကျပါက ကျပ် 50,000 နှင့် ၆ နာရီဆက်တိုက်ထက်ပို၍ နောက်ကျပါက ကျပ် 70,000) 1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000
အပိုအကာအကွယ် ၃ ခရီးဆောင်အိတ်နောက်ကျခြင်း (သတ်မှတ်ထားသော ဆိုက်ေရာက်ရာနေရာတွင် Check-in ဝင်ပြီး ၆ နာရီဆက်တိုက် နောက်ကျပါက ကျပ် 50,000) 300,000 800,000 300,000 800,000
အပိုအကာအကွယ် ၄ ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကျိုးများ ဆုံးရှုံးခြင်း (တစ်ခုတည်း သို့ အစုံလိုက် သို့ အတွဲလိုက်ဆုံးရှုံးခြင်းများ အတွက် ကျပ် 200,000) အများဆုံး 1,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 3,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 1,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 3,000,000 ကျပ်အထိ
၁၀။ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲ၊ မော်တော်ကားပြိုင်ပွဲ၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ကျောက်တောင်တက်ခြင်း၊ တွင်းတူခြင်း၊ လေထဲခုန်ချခြင်း၊ လေထီးခုန်ခြင်း၊ ေရငုပ်ခြင်း၊ အမြင့်ခုန်ခြင်း၊ အမြင့်ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း နှင့် လေပူဖောင်းစီးခြင်းစသည့် အန္တရာယ်ရှိ အားကစားနည်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်မှုများ
၁၄။ စစ်ပွဲ၊ ကျူးကျော်ခြင်း၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းစစ်၊ ပုန်ကန်မှု၊ တော်လှန်ရေး၊ ဆန္ဒပြမှု၊ အဓိကရုဏ်း၊သပိတ်မှောက်မှုများ
၁၅။ နျူကလီးယားလောင်စာများ (သို့) ေရဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ဓာတ်ရောင်ခြည် (သို့) ညစ်ညမ်းပျက်စီးမှုများ
သင်၏နေအိမ် သို့မဟုတ် အာမခံဝယ်ယူရာတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် စတင်မည့် နေရာမှ စတင်ထွက်ခွာသည့်အချိန်မှစ၍ (သတ်မှတ်ထားသည့် ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီ ၂၄ နာရီထက် စော၍ဖြစ်စေ၊ ခရီးေရာက်ရှိမည့်နေရာသို့ ၂၄ နာရီထက်နောက်ကျ၍ဖြစ်စေ အကာအကွယ် အကျုံးမဝင်ပါ။) သတ်မှတ်ထားသော ဆိုက်ေရာက်ရာနေရာသို့ ေရာက်ရှိသည့်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ခရီးသွားအာမခံအကာအကွယ်သည် ပေါ်လစီမှ သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်သည့် အချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှုများကို အကာအကွယ်မပေးပါ။ (ဥပမာ – ရှိရင်းစွဲေရာဂါလက္ခဏာများ၊ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း သတ်သေရန်ကြိုးစားခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ဆေးသုံးစွဲခြင်း၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဆိုးကျိုးများ) မှတ်ချက် – လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်သည့် အချက်များကို ပေါ်လစီတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အာမခံထားသူ၏ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့် မသက်ဆိုင်သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အာမခံဝယ်ယူမည်ဆိုပါက Proposal Form (အဆိုပြုလွှာ) တွင် မှန်ကန်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာမခံထားသူသည် မေးခွန်းများကို မှန်ကန်စွာနှင့် တိကျစွာ ဖြေပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မေးခွန်းများအား မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုခြင်းမရှိပါက အာမခံပေါ်လစီအား ငြင်းပယ်ခြင်း၊ လျော်ကြေးငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် အာမခံပေါ်လစီဖျက်သိမ်းခြင်းများအား ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အာမခံထားသူဘက်မှ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အန္တရာယ်ကို လက်ခံနိုင်သည့် အတိုင်းအတာနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ အာမခံထားသူသည် အသက်အာမခံထားရှိခြင်း၊ Proposal Form ပါအချက်အလက်များ ပြောင်းလဲခြင်းများ (သို့) အသက်အာမခံထားရှိသူသည် ခရီးသွားအာမခံထားမည်ဆိုပါက ကုမ္ပဏီကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
Are you ready to explore Myanmar?